Waxa laynoo diiday ku xadgudubka meherka si guurku u fududaado, taasi se way ka maqan tahay wakhtigan aynu joogno iyada oo la sharfaayo qofka, inyar oo dadka ilaahay u naxariistay mooyaane.
Waana waxa keenaaya in guurku daaho oo wiilasho awoodi waayaan isla markaana ay badnaato guumawga "Inantii oo la guursan waayo" wax kale ba iska daayoo xitaa waa waxa keena in xumaantu ku faafto dhallinyarada dhexdeeda isla markaana soo baxaan noocya guur oo cusub sida: Qudbe sirre iyo la tegista, dhamaan waxaas oo dhanna waxa u sabab ah iyada oo laga fogaaday dariiqii rasuulka (N.N.K.H) halka ay dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wax kaste. Rasuulkuna waa kii lahaa:
(Gabadha ugu barakada badani waa gabadha ugu meherka fudud) (1)
Ku xadgudbid iyo ka gaabin midna lama ogola.
Dhexdhexaadnimada isjacaylka dadka dhexdiisa:
Islaamku wuxuu ina amray dhexdhexaadnimada isjacaylka dadka dhexdooda waxaanu islaamku xidhiidhka dadka u dhigay miisaan caddaalad ah, taas oo loo miisaamay si isjacaylku usii socdo kalgacalkuna u waaro.
Sidaa daraadeed wuxuu islaamku inoo tilmaamay dhexdhexaadnimada isjacaylka iyo ka ganacsiga wanaagsan iyo in la badhxo la dhaqanka dadka isla markaana la dhexdhexaadsado reernimada lana joogteeyo wax wadaagista.
Haddii aad ka hesho oo uu ku cajab geliyo arrin ama ra'yi ama fikraddi ha u jeclaan jacayl daran kaas oo keenaya in aad iyada u dhimato ba, balse ka dhiga keliyaa doorasho ama se ka hellid.Adigoo isu diyaarinaya in aad ka noqon karto haddii aad ogaato in aan danni kuugu jirin. Cumar ilaahay haka raali noqdee baa yiri:
(Jacaylkaagu yuu noqon mid aad ku talaxtagtay oo saa'id ah, nacaybkaaguna yaanu noqon mid aad is odhanayso qofku ba muu dhinto ama se halaagsamo)
Sidoo kale Cali Binu Abii-Daalib ilaahay haka raali noqdee ayaa yidhi: (Qofka aad jeceshahay u jeclow si aad yar ah, laga yaabaa in uu maalin maalmaha ka mid ah uu noqdo mid aad necebtahay)
Xoogsigu wuxuu ku jideysan yahay in wixii xalaal ah laga shaqaysto lagana dheeraado wixii xaaraan ah ee aan banaanayn nooc kaste oo uu yahay uguna horeeyaan ribada, khamaarka iyo wax kaste oo lagu soo qaato dariiq aan banaanayn sida Laaluushka.
(1) – waxaa soo saaray Axmed (25119) iyo Xaakim mustadraka (2732) waana saxay dahabina waa ku waafaqay
Read 357 times	Last modified on Saturday, 27 February 2016 04:31
More in this category: « Dhexdhexaadnimada cibaadada Soon iyo Xajka Dhexdhexaadnimada Waxbixinta »